Somaliland oo ka hadashay Sababta Itoobiya u bedeshay Wakiilkii u joogay Hargeysa – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Somaliland oo ka hadashay Sababta Itoobiya u bedeshay Wakiilkii u joogay Hargeysa
Sabti, December, 8, 2018(HNN)-Maamulka Somaliland ayaa ka hadlay warar soo baxayay oo sheegayay in mudooyinkii ugu dambeeyay uu xumaaday xiriirkii kala dhaxeeyay dowlada Itoobiya kadib isbadaladii dalkaasi ka curtay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud (Faratoon) ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay in uu xumaaday xiriirkii kala dhaxeeyay Itoobiya, waxa uuna xusay in xiriirka labada dhinac in wali uu hagaagsan yahay.
Waxa uu sheegay Wasiirka in dacaayadaha la faafinayo aysan waxbo ka jirin, waxa uuna tilmaamay safiirkii Itoobiya u fadhiyay Somaliland ee la bedelay in uu qeyb ka ahaa safiiro badan ee Itoobiya ka bedeshay 60-dal.
Dowlada uu hogaamiyo Ra’isul Wasaare Abiy Ahmed ayaa wax badan ka bedeshay siyaasada dowladii kahoreesay kula macaamili jirtay maamulada Soomaaliya ka jira, waxa ayna dowlada Abiy xiriir toos ah la yeelatay dowlada federaalka.
Cise Cabdi Ciise
Somaliland oo ka hadashay Sababta Itoobiya u bedeshay Wakiilkii u joogay Hargeysa added by Ciise Cabdi Ciise on December 8, 2018